केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै
काठमाडौँ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गर्न चिनियाँ रेल प्रशासनका उच्च अधिकारी काठमाडौँ आउने भएका छन् । रेलमार्गको विषयमा सहमति जुटाउन चीन पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यसहितको टोलीसँग भएको सहमतिअनुसार…
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन ट्रम्पलाई भेट्न अमेरिका जाने
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ताको मिति र स्थान तय भएको छ । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाका शिर्ष नेताकाबीचमा भएको शिखर सम्मेलनका बारेमा मुन र ट्रम्पका बीचमा अमेरिकाको वासिङटनमा भेटवार्ता हुन…
इटहरीमा गुडिरहेको बसमा बम प्रहार
इटहरी । सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ स्थित धरान इटहरी सडकखण्डमा शनिवार दिउँसो गुडिरहेको बसमा अपरिचित व्यक्तिले विस्फोटक वस्तु प्रहार गरिएको छ । धरानबाट काँकडभिट्टतर्फ जाँदै गरेको मे १ ख २७३४ नं को सूर्योदय दिवा सेवाको बसलाई लक्षित गरी बाहिरबाट फालिएको…
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आगलागी पीडितका लागि राहत सामग्री लिएर मुगु गएका छन । मुगुमा कार्मरोङ्ग गाउँपालिका–४ किम्रीमा बिहीबार भएको आगलागीबाट १७ घर जलेर क्षति भएको तथा ११२ जना आगलागीबाट प्रभावित भएका थिए । गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन…
संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु
काठमाडौँ । संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को दोस्रो अधिवेशन आइतबारदेखि शुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अपराह्न ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरे अनुरुप दुवै सदनको बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा…
अमेरिकी विदेशमन्त्री र राजदुत डा.कार्कीको भेटघाट
एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रम्पबाट नव नियुक्त सेक्रेटरी अफ् स्टेट अमेरिकी विदेशमन्त्री माईकल पोम्पेओसँग राजदुत डा. अर्जुन कुमार कार्कीको भेटघाट भएको छ । यही मे २ तारिख दिन वाशिंगटन डिसीमा आयोजित नयाँ सेक्रेटरी अफ स्टेटको सपथ ग्रहण समारोहमा भेटघाट हुँदा नव…
वरिष्ठ जापानी चिकित्सकद्वारा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको अवलोकन
काठमाडौं। जापानबाट नेपाल आएका बरिष्ठ चिकित्सक डा. कोशो योशिकाओको नेतृत्वमा आएका जापानी चिकित्सकहरु र भोकेश्नल ट्रेनिङ टिमले शनिबार नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको निरिक्षण गरेका छन्। रोटरी इन्टरनेश्नल अन्र्तगर्त इन्फेक्शन कन्ट्रोल कार्यक्रम लिएर नेपाल आएको जापानी टोलीले अस्पतालको अवलोकन गरेको हो। ललितपुरको…
मृत्युदण्ड सुनाइएका यादवको जीवन रक्षार्थ ‘सहमतिपत्र’ साउदी अदालतमा पुर्याउन माग
काठमाडौं। विगत १२ वर्षदेखि साउदी जेलमा रहेका धनुषा कमला नगरपालिका माची झिट्कैयाँ–४ का उमेश यादवलाई साउदीको अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा समाजसेवी सरोज रायले पत्रकार सम्मेलन गरेर विगत १२ वर्षदेखि साउदी अरेबियाको जुबेल जेलमा रहेका ३८ वर्षीया यादवको जीवन…
मुम्बइसँग पंजाब हार्दा युवराज सिंहले रोहित शर्माको कलर समातेपछि...
एजेन्सी। आइपिएल ११ को ३४ औं खेलमा मुम्बइ इण्डियन्सले किंग्स इलेभेन पंजाबलाई ६ विकेटले हरायो । इन्दौरमा खेलिएको यो खेलमा पंजाबले मुम्बइलाई १७५ रनको लक्ष्य दिएको थियो । मुम्बइले यो लक्ष्य १ ओभर बाँकी छँदै ४ विकेटको क्षतिमा भेट्टायो । …
कोहलीलाई पराजित गर्न धोनी तयार, बलरकालागि विशेष योजना
एजेन्सी। आइपीएलको ११ औं संस्करणमा चेन्नई सुपर किंग्सले आफ्नो दोस्रो घर महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) स्टेडियममा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको सामना गर्दैछ। चेन्नईलाई यसअघिको खेलमा कोलकाता नाइट राइडसले पराजित गर्दै अंक तालिकामा पहिलो स्थानबाट तल झारेको थियो। सो हारबाट आहत भएका…
‹ First Newer 4166 4167 4168 4169 4170 Older Last ›